रोचक जानकारी – Child Pati
न्युजिल्यान्डको उत्तरी आइसल्यान्डस्थित समुद्री किनारमा वाइटोमो ग्लुवार्म गुफाहरु पाइन्छन् । ती गुफाहरु चम्किला नीलो प्रकाशले जगमगाउने गर्छन्। त्यहाँ एक अनौठो प्रजातिका जुनकीरीहरु पाइन्छन् । जसले गर्दा गुफाहरु सदैव चमचम चम्किने गर्दछन् ।
View More चम्किलो गुफा
चीनको युनान प्रान्तस्थित क्वीजिंगमा फुलहरुको विशाल लुओपिङ काउन्टी छ । यो काउन्टी २०९६ वर्ग किमीमा फैलिएको छ । यो क्यानोला फुलहरुको बिशाल बगैँचा हो । समुन्द्र, पहाड र तालको बीचमा यो काउन्टी फैलिएको छ ।…
View More लुओपिङ काउन्टी
इन्द्रेणी कसरी देखिन्छ ?
admin June 6, 2019	No Comments CloudRainbow
कुनै बेला घामसँगै पानी पर्दा इन्द्रेणी परेको देखिन्छ । आखिरमा यो इन्द्रेणी कसरी बन्छ त ? सूर्यको प्रकाशमा विभिन्न सातवटा रङहरु रहेका हुन्छन् । त्यसलाई हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ । कहिलेकाहीँ साबुन वा पानीको…
View More इन्द्रेणी कसरी देखिन्छ ?
admin June 3, 2019	No Comments BananaBirdBirdsCumulusEagleGorillaHole on EarthHummingHumming BirdsKiwiLighteningOstrichOwlParrotPenguin
चरा | Bird चरा अण्डा पार्ने मेरुदण्डयुक्त प्राणी हो । संसारमा दश हजारभन्दा बढी प्रजातिका चराहरु पाइन्छन् । नेपालमा आठसय छयहत्तर प्रजातिका चराहरु पाइन्छन् । चराको हड्डी खोक्रो हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरुलाई उड्न सजिलो हुने…
View More थाहा छ ?
वशाल स्क्वीडको आँखा बडो विचित्रको हुन्छ । यसको एक शिरदेखि दोस्रो शिरसम्मको लम्बाई ४० से.मी. हुन्छ । यो जीवअँध्यारो स्थानमा रहन्छ । यसको आँखा पनि ठुलो हुन्छ, जसले स्पष्टसँग देख्न मद्दत पुऱ्याउँछ । अष्ट्रेलिया महाद्वीपमा…
View More विचित्रका जीवजन्तुहरु